Thursday November 27, 2014 - 11:48:09 in Wararka by Super Admin
Dilalka iyo beegsiga lagu hayo Ciidanka Nidaamka Dhaaguutka ee dalka Masar ayaa dalkaas kasii soconaya, iyadoo gobolka Seynaa uu yahay halka ugu badan ee lagu laayo Askarta Masaarida ah ee ka amar qaata Korneylka talada afembiga ku qabsaday ee Cabdul
Maalintii shalay aheyd xoogag hubeysan oo loo maleynayo inay ka tirsanyihiin Mujaahidiinta gobolka Seynaa ka dagaallama ayaa weerar la eegtay gaari ay la socdeen Askar Masaari ah oo marayay magaalada Al-Cariish, iyagoo halkaas ku dilay laba Askari iyo hal Sarkaal.
Bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu xaqiijiyay weerarkaas, waxaana Wasaaraddu ay ku kala sheegtay magacyada Askarta la beegsaday Korneyl Ibraahiim Axmed Badraan, xidigle Cabdi Salaam Suweylim iyo dable Xammaadah Jamaal Yuusuf.
Dhinaca kale Maxkamad ku taalla magaalada Al-Iskandariya ee dalka Masar ayaa xukun ku ridday ku dhawaad 80 carruur ah oo ay da'doodu ka yartahay 16 jir, waxaana carruurtaas badankood lagu eedeeyay inay ka tirsanyihiin kooxaha dalkaas laga mamnuucay, xukunnada lagu rideyna waxay u dhaxeeyaan labo illaa iyo seddax sanno.
Bishii September ee aan soo dhaafnay ayaa Ururka Al-Karaama ee u dooda waxa loogu yeero xuquuqda insaanka, islamarkaaa xaruntiisu tahay magaalada Jineefa ee dalka Swezeland waxa Bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in xabsiyada dalka Masar ay ku xiranyihiin boqollaal carruur ah oo aad u da'yar, kuwaas oo Nidaamka As-siisii uu ku heysto inay geystaan dembiyo been abuur ah iyo inay gacan siinayeen kooxo ay ka mid tahay Jamaacada Ikhwaankul Muslimiinka ee dalkaas laga mamnuucay.
Sida ay Hey'addu sheegtay waxaa inta badan carruurtaas la xukumay la qab qabtay bishii July ee Sanadkii 2013-kii ee aan soo dhaafnay xilli ay ka qeyb galayeen dibabaxyo ka dhan ah Nidaamka Meliteriga ee maamulk dalkaas afgembiga ku qabsaday, carruurta xabsiyada Masar ku xiran ayay warbixintu sheegeysaa inay la kulmaan xadgudubyo isugu kufsi iyo jirdil arxan darro ah si ay u qirtaan waxyaabo aysan geysan.
Wareysiyo laga qaaday dhowr ka mid ah carruurta laga sii dayay xabsiyada dalka Masar waxay sheegeen inay la kulmeen tacdiibin naxriis darro ah oo ay ka mid yihiin in lagu gubo sigaar, in koronto lagu qabto iyo in Eeyo lagu cabsiiyo.
Bishii August warbixin ay soo saartay isla hey'addan waxay ku sheegtay in tobon ruux oo laba ka mid ah ay caruur ahaayeen ay ku dhinteen xabsiyada dalkaas, kuwaas oo sababsaday jirdil loo geystay, waxaana taas ay ka dhigeysaa in tirada guud ee dadka tacdiinta ugu dhintay jeelasha qarsoodiga ah ee dalkaas kuyaalla inay kor u dhaafeen 90 ruux dhowr bilood gudahood.
Walaaca ugu badan ee hadda la muujinayo ayaa ah in garaacidda iyo jirdilka ka socda xabsiyada dalka Masar inay galaaftaan nolasha maxaabiis hor leh gaar ahaan kuwa carruurta ah, iyadoo dadka xabsiyada laga sii daayo ay ka sheekeynayaan xaalad adag oo halkaas ka taagan.
Tan iyo intii dalka Masar uu afgembiga ku qabsaday maamulka dhiigyo cabka ah ee uu hogaaminayo Korneylka Murtadka ah ee Cabdulfataax siisii waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka xooggan uu nidaamkaas uu ku hayo Muslimiinta dalkaas ku dhaqan, kumanaan ruux ayaa la dilay, halka kumanaan kalena ay xabsiyada ka buuxaan.